ဝယ်ရန် | ငှားရန်
ဆက်သွယ်ရန် | တည်နေရာ
သင် account တစ်ခုလိုအပ်ပါသလား? ဒီမှာမှတ်ပုံတင်ပါ။ သင့်ရဲ့စကားဝှက်ကိုမေ့နေပါသလား?
ဖောက်သည်အခန်းကဏ္ကိုရွေးချယ်ပါကိုယ်စားလှယ်ရုံးကုမ္ပဏီ ငါသဘောတူတယ် စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများ
MINROGROUP Consulting ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
စျေးအကွာအဝေး: €0to € 1,500,000,000 to € XNUMX
ငါတို့ထင်တယ်0ရလဒ်များ။ ရလဒ်များကိုပြပါ
ငါတို့တွေ့ပြီ0ရလဒ်များကို
→ MRG အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းကိုဝယ်ယူပါ ငှား
→ MRG ဆောက်လုပ်ရေးREရိယာ
ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးသောနေရာများတွင်အရည်အသွေးမြင့်မားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်အိမ်ခြံမြေများအတွက်အထူးကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း MINROGROUP သည်တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနှင့်နိုင်ငံတကာတွင်နာမည်ကြီးခဲ့သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက်အထူးကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးမြင့်သောလူနေအိမ်နှင့်စီးပွားဖြစ်အိမ်ခြံမြေအကျိုးအမြတ်များအပြင်ကုမ္ပဏီများနှင့်စက်မှုလက်မှုစက်ရုံများအတွက်အကျိုးဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင်ထိပ်တန်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အိမ်ခြံမြေကျွမ်းကျင်သူများသည်သင်၏အိပ်မက်သစ်၏အိမ်သို့မဟုတ်အားလပ်ရက်အိမ်တွင်ပြီးပြည့်စုံသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်သင်၏ရှာဖွေမှုတွင်သင့်အားအကြံဥာဏ်နှင့်ကူညီရန်သင့်အတွက်ထိုနေရာတွင်ရှိသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးအသစ်သို့မဟုတ်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်မှု၊ ငှားရမ်းခြင်းသို့မဟုတ် ၀ ယ်ခြင်းဖြစ်စေနိုင်ငံအတွင်း၌ဖြစ်စေမြို့လယ်အလယ်၌ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ယက်သည်ဂျာမနီနှင့်ပြည်ပရှိအလှပဆုံးအိမ်ခြံမြေများကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးသည်၊ ထို့ကြောင့်သင်လည်းပါ ၀ င်သည်။
တိုက်ခန်းများ၊ ဗီလာများ၊ တိုက်ခန်းများနှင့်ရုံးခန်းများ
တူရကီရှိထိပ်တန်းအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းအေဂျင်စီတစ်ခုအနေဖြင့်၊ MINROGROUP REAL ESTATE AGENCY သည်မှန်ကန်သောအိမ်ခြံမြေများရွေးချယ်ခြင်းအပေါ်အကြံပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အိမ်ခြံမြေစျေးကွက်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြည့်စုံပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်များရှိပြီးအရည်အချင်းနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုဖြင့်ပံ့ပိုးသည်။
တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်ရောက်ရှိနေသောကျွန်ုပ်တို့၏စျေးဝယ်စင်တာများနှင့်လက်လီရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများသည်သင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်မှန်ကန်သောစျေးဝယ်စင်တာသို့မဟုတ်လက်လီရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုရှာဖွေလိမ့်မည်။ တစ် ဦး ချင်းစီ၏အကြံဥာဏ်များ၊ သီးသန့်စျေးဝယ်စင်တာများနှင့်လက်လီရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုအကောင်းဆုံးလက်တွဲဖော်တစ် ဦး အနေဖြင့်ရယူခြင်းမှတစ်ဆင့်သင့်ဘက်မှကျွန်ုပ်တို့ဘက်တွင်ရှိပါသည်။
ဟိုတယ်ကြယ် ၅ ပွင့်၊
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း Istanbul, Fetiye နှင့် Antalya တို့ကဲ့သို့ဟိုတယ်အိမ်ခြံမြေစျေးနှုန်းများသည်²စဉ်ဆက်မပြတ်မြင့်တက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်စျေးကွက်ထဲမှဟိုတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများပြားစွာရှိသည်။ သမ္မာသတိရှိစွာဖြင့်ကြယ်ငါးပွင့်အဆင့်ရှိဟိုတယ်များကိုကျွန်ုပ်တို့မဖော်ပြနိုင်ပါ။
MINROGROUP CONSULTING INVESTMENT သည်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတစ်ခုအနေဖြင့်သင့်လျော်သောစက်မှုဇုန်ကိုရွေးချယ်ရာတွင်ပုဂ္ဂလိကတစ် ဦး သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး အနေဖြင့်ဖြစ်စေ၊ စက်မှုဇုန်မြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် ၀ ယ်ယူမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံပေးပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံကျွမ်းကျင်သူများထံမှတစ် ဦး ချင်းအကြံဥာဏ်များနှင့်အတူ, သင်အမြတ်အစွန်းစက်မှုဇုန်yourရိယာသို့သင်၏လမ်းအပေါ်ပထမ ဦး ဆုံးခြေလှမ်းကြပြီ။
€ 150 / လ
အီဗန်စတ မန်ဟက်တန်, အစ္စတန်ဘူလ်
အမျိုးအစား:အိမ်များ im ဝယ်ခြင်း
အခန်းပေါင်း:3မကောင်းတဲ့:5 အရွယ်အစား:1,500.00 မီတာ2 အိုင်ဒီ:668
Hudson စားသောက်ဆိုင် & ဘား
Rutgers Ave, ဂရင်းဗိုင်း, Bodrum
အမျိုးအစား:ရောင်း im ဝယ်ခြင်း
အခန်းပေါင်း:5မကောင်းတဲ့:2 အရွယ်အစား:700.00 မီတာ2 အိုင်ဒီ:154
€ 16,000 / လ
Bowers လမ်း, အမြင့်, Bodrum
အမျိုးအစား:ရုံး im ငှားရန်
အခန်းပေါင်း:10မကောင်းတဲ့:2 အရွယ်အစား:150.00 မီတာ2 အိုင်ဒီ:150
€ 2,000 / လ
၈၈ ဂရင်းနစ်စိန့် ၃၂၇၊ မန်ဟက်တန်, အစ္စတန်ဘူလ်
အမျိုးအစား:ကွန်ဒို im ငှားရန်
အခန်းပေါင်း:5မကောင်းတဲ့:2.5 အရွယ်အစား:250.00 မီတာ2 အိုင်ဒီ:145
၅၃ W ၈၈ လမ်း၊ အနောက်ဘက်, အစ္စတန်ဘူလ်
အမျိုးအစား:villa im ဝယ်ခြင်း
အခန်းပေါင်း:3မကောင်းတဲ့:3 အရွယ်အစား:250.00 မီတာ2 အိုင်ဒီ:139
€ 2,100 / လ
85-02 67 ရိပ်သာ, 11374, အစ္စတန်ဘူလ်
အခန်းပေါင်း:10မကောင်းတဲ့:2 အရွယ်အစား:150.00 မီတာ2 အိုင်ဒီ:132
သင်၏ရှာဖွေမှုနှင့်ရောင်းချမှုကို MINROGROUP CONSULTING INVESTMENT ဖြင့်ပုံစံအသစ်ပေးပါ။
သင်သည်အရည်အသွေးမြင့်သောလူနေအိမ်တစ်ခုသို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ်နေရာတစ်ခုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ရှာဖွေနေသည်ဖြစ်စေအရေးမကြီးပါ။ သင်သည်ကုမ္ပဏီတစ်ခု၊ ကိုယ်ပိုင်စက်ရုံတစ်ရုံဝယ်ယူလိုသည်ဖြစ်စေ၊ အကောင်းဆုံးကြယ်ငါးပွင့်ဟိုတယ်ကိုရှာဖွေပါသို့မဟုတ်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းကိုစတင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အမျိုးမျိုးသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်များတွင်သင်သည်သင်၏ပထမတန်းစားသတင်းအချက်အလက်နှင့်သင်၏စိုးရိမ်မှုများအပေါ်ပံ့ပိုးမှုပေးမည့်ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်သင်အမြဲတမ်းတွေ့လိမ့်မည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံခန့်ခွဲမှု ၀ န်ဆောင်မှုများ - ကျွန်ုပ်တို့သည်အဓိကပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းများအားလုံးအတွက်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနှင့်ဖောက်သည်တစ် ဦး ချင်းစီ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကိုကမ်းလှမ်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစုစုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များအပါအဝင်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများအပြင်ချမ်းသာသောလူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်မိသားစုများအတွက်အကျိုးဆောင်ခြင်းနှင့်အခြားငွေပေးငွေယူ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဈေးကွက်ပြင်ပရှိပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည် - ၎င်းတို့သည်စျေးကွက်တွင်လူသိရှင်ကြားမရှိခြင်း၊ တိုက်ခန်းများ၊ ရုံးခန်းများ၊ ဟိုတယ်များ၊ တိုက်ခန်းအဆောက်အအုံများ၊ စျေး ၀ ယ်စင်တာများ၊ စူပါမားကက်များ၊ ဆေးရုံများ၊ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးပစ္စည်းများ၊ ကားရပ်နားရန်နေရာများ၊
MINROGROUP BAU- UNDERNEHMUNG သည်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ လူနေအိမ်ရာဆောက်လုပ်ရေး၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးတည်ဆောက်မှု၊ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများတွင်ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်ဝသောယုံကြည်စိတ်ချရသောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်သည်။ သင်၏ဆန္ဒနှင့်အညီတစ်မိသားစုတည်း၊ မိသားစုနှစ်စု၊ မိသားစုနှစ်စုနှင့်မိသားစုများစွာ၊ စီးပွားဖြစ်အဆောက်အအုံများ၊ ရုံးခန်းများနှင့်ဟိုတယ်များကိုတစ် ဦး ချင်းစီပြုလုပ်ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အမြင်တွင်အုတ်မြစ်နှင့်ကွန်ကရစ်များဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားသောနံရံလေးခုထက်မကပါ ၀ င်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်တွင်လူနေမှုနေရာသည်လူတို့၏သက်သောင့်သက်သာရှိမှုနှင့်အဆင်ပြေမှုထက်ပိုမိုသောအရာများကိုပေးသင့်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှု၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
ကော်ပိုရေးရှင်း၊ အိမ်ခြံမြေနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်တိုးတက်မှုအခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေရန်ကူညီသည်။ MINROGROUP CONSULTING INVESTMENT သည်သင့်တော်သောနေရာများတွင်အရည်အသွေးမြင့်အစိုင်အခဲလူနေအိမ်နှင့်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၊ တူရကီရှိတည်ငြိမ်။ ရေရှည်တည်တံ့သောကုမ္ပဏီများနှင့်အမြတ်အစွန်းများသောအဆောက်အအုံများသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ - ရုံးအဆောက်အအုံများ၊ လူနေအိမ်အဆောက်အ ဦး များ၊ အိမ်အသစ်၊ တိုက်ခန်း ၀ ယ်လိုခြင်းသို့မဟုတ်အိမ်များ၊ တိုက်ခန်းများကို ၀ ယ်လိုသူများအတွက်၊ MINROGROUP CONSULTING INVESTMENT သည်တူရကီရှိအရည်အသွေးမြင့်အိမ်များနှင့်တိုက်ခန်းများကိုရှာဖွေရန်သင့်အတွက်ပိုင်ဆိုင်သောမြို့တစ်မြို့တွင်ပစ္စည်းဝယ်ယူရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ တစ် ဦး ချင်းလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် ၀ န်ထမ်းများကသင်၏နေအိမ်အသစ်သို့မဟုတ်တိုက်ခန်းအသစ်အားအကြောင်းကြားရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ကူညီလိမ့်မည်။ သင်အိမ်ခြံမြေ ၀ ယ်သည့်မြို့အပေါ် မူတည်၍ အချို့သောရှုထောင့်များကွဲပြားသော်လည်းတူညီသောအရာတစ်ခုမှာအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသည်သင်၏ဘဏ္financialာရေးအနာဂတ်ကိုလုံခြုံစေသည်။
သငျသညျအိမ်ခြံမြေကိုအလွန်စိတ်အားထက်သန်ခြင်းနှင့်စီးပွားရေးရည်မှန်းချက်များများစားစားရှိသောခိုင်မာသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ် ဦး လား။ ထိုအခါ MINROGROUP CONSOULTING INVESTMENT အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်အောင်လုပ်ရန်ယခုအခွင့်အရေးယူပါ
သင်၏ငွေရေးကြေးရေးအတွက်၊ တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သည့်ဖြေရှင်းနည်းများအတွက်
သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်သင်၏ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုသည်သင်၏အားကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၊ သင်၏ဘဝနှင့်သင်၏ဆန္ဒများကိုအပြည့်အဝထည့်သွင်းစဉ်းစားပါကအားလုံးထက် ပို၍ ဖြစ်နိုင်သည်။ MINROGROUP CONSULTING INVESTMENT သည်ဤယုံကြည်ချက်ကိုလိုက်နာသည်။
ဤအကြောင်းကြောင့်သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံစိုက်မှုဖြစ်သည်။ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအခြေအနေနှင့်သင်၏ပန်းတိုင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အဆုံးအဖြတ်ပေးသည် - ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်၊ ပင်စင်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဘဝအန္တရာယ်များ၊ မျိုးဆက်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အိမ်ခြံမြေစီမံခန့်ခွဲမှုတို့၏အကြံပေးနယ်ပယ်များတွင်ဖြစ်သည်။
MINROGROUP ကွန်ယက်သည်စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးချဲ့နေသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များအရည်အချင်းဝန်ဆောင်မှုကိုဆက်ကပ်။ အနာဂတ်ကိုအတူတကွ!
“ ဘယ်နေရာကိုပဲရောက်ဖြစ်၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဖြစ်စေ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ရောက်နေပြီ။ ” ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကအိမ်ခြံမြေကုမ္ပဏီအလိုရှိလျှင်ပင်ဖြည့်ဆည်းပေးရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏အတွေ့အကြုံများကိုအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အဆင့်မြင့်ပညာရှင်ဆန်ဆန် ဦး ဆောင်နိုင်ရန်အတွက်ဥရောပ၊ အနီး၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ အာရှ၊ အာဖရိကနှင့်အမေရိကရှိနိုင်ငံပေါင်း ၄၂ နိုင်ငံကျော်တွင်သင့်အားအတွေ့အကြုံရှိသောအတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့များသည်သင့်အတွက်နေရာယူထားသည်။ MINROGROUP ၏အဓိကတည်နေရာမှာ Istanbul Turkey ဖြစ်သည်။
သို့သော်သင်သည်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်အိမ်ခြံမြေဝယ်ယူအာရုံစိုက်ပါ။ တိုင်းပြည်၊ တည်နေရာနှင့်မြို့၏စည်းကမ်းချက်များ၌သင်၏စံနှုန်း။ MINROGROUP မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်မှုများကိုစမ်းသပ်၊
စမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ သေချာတာပေါ့။ အမြတ်အစွန်း။
ဟိုတယ်များ၊ လူနေအိမ်ရာအဆောက်အအုံများ၊ တိုက်ခန်းများ၊ ဈေးဝယ်စင်တာများ၊ ရုံးခန်းများ၊ ကုမ္ပဏီများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများဖြစ်သည်။
တစ် ဦး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်မိတ်ဖက်ဖြစ်လာပါ
NDA | လျှို့ဝှက်သဘောတူညီမှု
MINROGROUP CONSULTING INVESTMENT Ataköy 7-8-9-10 Kısım Selenium Retro E5 Çobançeşme Yanyol အမှတ် 18/1 A.Blok, K.2 D.45 - 34158 Istanbul | ကြက်ဆင်
ဒီမှာမှတ်ပုံတင်ပါ။ သင့်ရဲ့စကားဝှက်ကိုမေ့နေပါသလား? မှတ်ပုံတင်ခြင်းသို့ပြန်သွားရန် သို့ပြန်သွားရန်ရဲ့ login မှ